Things Kuitira On Long Train Panzendo | Save A Train
musha > Travel Europe > Things Kuitira On Long Train Panzendo
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 25/03/2020)
A chitima tasva isu Hunoita kuti umbomira, kutarisa nepahwindo uye kunzwisisa rwokuramba yokutora nguva yedu. Vatariri zvinonakidza asi anogona dzimwe nguva kutora simba redu rose, refu chitima rwendo ndiyo mukana chinja kure uye usununguke zvako. Ita zvikuru kubva rwendo rwenyu - vari pano zvinhu zvedu pamusoro kuita chitima nzendo refu kuti pave nerimwe mufambi ane yokumbofaranuka uye kunakidzwawo tasva.
Mimhanzi vachitsigira refu chitima Panzendo
Isa pamahedhifoni dzako uye zvishoma apo kuteerera kwako kufarira mimhanzi. Hapana nzira iri nani kunakidzwa picturesque girl. Sununguka uye murinde yakaisvonaka nzvimbo nenhokwe kare sezvo uchiteerera chaunofarira Artists.
Dzidza mutauro mutsva
Wadii kutanga unyanzvi itsva parwendo rwenyu? Kana uri parwendo kunyika kuti anotaura mutauro wakasiyana, refu chitima rwendo inopa mukana atore mashoko uye zvirevo mashoma.
Zvakanaka kuziva zvinokosha chero mutauro kana kushanyira imwe nyika. Luckily, pane Apps zhinji uye MAPODCAST unogona kukopa kuti kosi kusanganisira yakakurumbira Spanish, ChiJerimani, ChiItalian, uye mitauro Chirungu.
Reading kukuru yokumbofaranuka uye anogara nzira inofadza zvakaitika nguva. Long kushanda maawa uye takabatikana kungareva shoma nguva yokuverenga, saka kwenguva chitima rwendo rinomiririra mukana kusvetukira bhuku rako kana eBook. Kana uchinzwa simbe uye vanoda munhu kuita kuverenga here, ane audio-bhuku rimwe nzira huru.
With Laptops, iPads, uye smartphones chamuinacho, zviri nyore kuwana varaidzo onboard. Kubata kwako kufarira wepaterevhizheni kana kutarisa kuti firimu wanga achipanga kutarisa.
Kana pane WiFi iripo kana kwete, ipfungwa yakanaka kukopa chero anoratidza kana bhaisikopo waronga kungwarira pamberi rwendo yako. Kubata kwako anodiwa on-screen nyaya usati munochiziva, uchava panguva yenyu kuenda.
Zviri nyore kunzwa kuneta uye usimbe munguva refu chitima rwendo. Pashure akagara muchitima kwemaawa, zvakakosha ruoko makumbo ako kana zvichiita. A pfupi vanofamba kuti kandini kuchakubatsira kushandisa nguva uye kuti anzwe recharged. Famba nengoro kusvika kandini, tarisa nzvimbo uye zvimwe dhizeti ane chinwiwa kwaunoda
Meet itsva vanhu refu chitima Panzendo
Vatariri nechitima inogona mumagariro ruzivo. Kuita itsva vanhu pamusoro nezvitima zviri nyore pane dzimwe modes ose senga. Kusiyana ndege, une rusununguko famba uye tichiita nevamwe vafambi. Zvinonakidza zvaungadzidza kubva vamwe vanhu vavo nyaya – kutaura upenyu, kushanda uye kukura samambure yako. Ask the person next to you about the book their reading, kudzibayira chinonhuhwira kana kungoti kutanga kukurukura pamusoro rwendo vari kuenda. Zvinonzi kupfuura dzamunotaura apo parwendo Europe nechitima kuti pave chigumegume Ndangariro.
Lyon kuna muMarseilles Zvitima
Bordeaux kuna muMarseilles Zvitima
Gadzirira yako inotevera refu chitima Panzendo
The chitima nzendo refu dzimwe chete nguva yakanyarara uchiri rwendo. Inogona kuva tarenda mukana kuti wedzera uye kugadzirira kwako kuenda akasarudzwa. Drink mvura yakawanda, kudya zvimwe zvokudya uye kana zvichiita, hope. Kushandisa refu chitima rwendo yako nokuchenjera kuchakubatsira unonzwa uchifefeterwa uye kwakapa - akagadzirira yako inotevera rwendo.
Unoitei munguva chitima nzendo refu? Ngatizive nesu tweeting pa @SaveATrain! , Unogona kuwana mamwe magariro migero edu Saveatrain
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/things-long-train-journeys/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
longtrainjourneys Train Travel famba